Properties for Sale in Mingaladon - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Properties for Sale in Mingaladon
Mingaladon | Yangon Region
Phone No. To Contact စညျတျောကွီး အိမျ ခွံ မွေ အကြိုးဆောငျ
Ad Number S-10174974
🏡 မင်ျဂလာဒုံ ကွံခငျးစု လဆေိပျ ၊ Myanmar Life Hotel အနီးရှိ ခွံကယျြ လုံးခငျြးအိမျ ညှိနှိုငျးအရောငျး 🏡
🏡 မင်ျဂလာဒုံ ကွံခငျးစု လဆေိပျ ၊ Myanmar Life Hotel အနီးရှိ ခွံက...
Phone No. To Contact The Perfect Home Real Estate & General Services
Ad Number S-10167908
The Perfect Home Real Estate & General Services Close
🔷 ဇကေမ်ဘာစကျမူ့ဇုနျ🔷 မွနှေငျ့ဂိုဒေါငျရောငျးမညျ။
🔷 မွအေကယျြ-4.6ဧက 🔷 မွဖေို့အုတျခတျ 🔷 ဈေးနူနျ...
Ad Number S-10162824
စကျရုံ + မွကှေကျ အရောငျး ( S - 126 ) တညျနရော ။ ...
Phone No. To Contact Pearl Real Estate Group
09795212645 - 09978999921,
Ad Number S-10157000
(70'x140')အကယျြ၊ မင်ျဂလာဒုံ၊ ပွညျလမျးမပျေါ(ထောကျကွနျ) ရှိ လုံးခငျြးအိမျရောငျးရနျရှိ
(70'x140')အကယျြ၊ 2RC, စီး...
9,900 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact Land And Houses Co.,Ltd
Ad Number S-10111272
(2 ဧက)အကယျြ၊ မင်ျဂလာဒုံမွို့နယျ၊ ပုလဲမွို့သဈသဈခှဇုနျ ရှိ မွကှေကျကယျြ ရောငျးရနျရှိ
5,000 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10169177
58,500 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10168466
Phone No. To Contact Aryone Oo Realestate
Ad Number S-10154739
Aryone Oo Realestate Close
4,200 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10154375
မင်ျဂလာဒုံမွို့နယျတှငျ စကျမှုလကျမှုလုပျငနျးမြားလုပျကိုငျလိုသူ လုပျငနျးရှငျမြားအတှကျ...
31,000 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact နသေ့ဈရနျကုနျ
Ad Number S-10152823
မင်ျဂလာဒုံမွို့နယျ၊ ပွညျလမျးမပျေါတှငျ လူနေ ရုံးခနျးဖှငျ့ရနျ၊...
Ad Number S-10152594
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်သည် ရန်ကုန်မြို့၏ မြောက်ဘက်စွန်းပိုင်းတွင် တည်ရှိသောမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်သည် ။ မြို့နယ်၏ မြောက်ဘက်တွင် မှော်ဘီမြို့နယ် ၊ အရှေ့ဘက်တွင် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ အနောက်ဘက်တွင် အင်းစိန်မြို့နယ်နှင့်ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၊ တောင်ဘက်တွင် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တို့ဖြင့် ဝိုင်းရံတည်ရှိလျက်ရှိသည် ။ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်သည် ၉ မီလိုမီတာကျယ်ဝန်းပြီး ရပ်ကွက်ပေါင်း ၃၁ ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် ။ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်သည် ရန်ကုန်မြို့၏ အဓိက ခရီးသွားလာမှုများအတွက် အရေးပါသည့် အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေး ကားဂိတ်နှင့် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တည်ရှိသောမြို့နယ်လည်းဖြစ်သည် ။ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဂိတ်သည် ရန်ကုန်မြို့မှနေ၍ မြန်မာပြည်အနံ့ခရီးသွားလာရန်အတွက် အထိက အသက်သွေးကြောဖြစ်သလို ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကြီးသည်လည်း မြန်မာပြည်တွင်း နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမက နိုင်ငံတကာအထိပြေးဆွဲပျံသန်းလျက်ရှိသည့် လေဆိပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည် ။ ရန်ကုန်မြို့၏ အရေးပါသည့် ပညာရေး တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တပ်မတော်သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ် တို့တည်ရှိသော မြို့နယ်လည်းဖြစ်သည် ။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တစ်ခုတည်းသောရှိသည့် သဘာဝဘေးမဲ့ဥယျာဉ်ကြီး လှော်ကားဥယျာဉ်တည် ရှိသောမြို့နယ်လည်းဖြစ်သည် ။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်သည် ရန်ကုန်မြို့၏အဝင်ဝ မြို့နယ်ဖြစ်ပေမယ့် စည်းကားပြီး အထင်ကရ အရေးပါသည့် အခြေခံ အဆောက်အဦးများရှိသည့် အတွက် အရေးပါသောမြို့နယ်များထဲက တစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်သည် ။